China Umthi weKrisimesi kunye ne-Wellheads mveliso kunye nabenzi | Cepai
Umthi weKrisimesi kunye neentloko ezilungileyo
Metal ezimbini-Piece lencopho Ball Valve
IBHOLA Screw OPERATOR ISango Valve
INDLELA YOKUQALA YOKUJONGA IVEKI
Umkhono wangaphandle weCage Chock Valve
Ukwandiswa ngeVeveji yeSango leKondage kwi-API6A esemgangathweni
Ngesanti kubunzulu baphantsi Operated Gate Valve
Uhlobo lwe-Screw Type Mud Valve ye-API6A esemgangathweni
Isandla seValve yeSango leMigangatho ye-API6A
Ukuphanda udaka okuphindiweyo
Ukuphindaphinda kovavanyo oluphezulu
Umthi weKrisimesi oqhelekileyo kunye ne-Wellheads zihambelana ne-API 6A 21th Edition, kwaye basebenzise izixhobo ezifanelekileyo kwimeko yokusebenza eyahlukileyo ngokomgangatho we-NACE MR0175.
Imveliso Ukucaciswa Level: PSL1 ~ 4
Udidi lwezinto: AA ~ HH
Isidingo sokuSebenza: PR1-PR2
Ubushushu Class: LU
I-Wellhead kunye nomthi weKrisimesi yi-CEPAI zisetyenziselwa ukumba kakuhle kunye nemveliso yeoyile okanye yegesi, inaliti yamanzi kunye nokusebenza komngxunya. Umthi we-wellhead kunye nomthi weKrisimesi ufakwe ngaphezulu kwequla ukutywina indawo ye-annular phakathi kwe-casing kunye ne-tubing, unokulawula uxinzelelo lwe-wellhead kwaye uhlengahlengise inqanaba lokuhamba kakuhle kunye neoyile yothutho ukusuka kumgca ukuya kumbhobho.
Senza i-wellhead kunye nomthi weKrisimesi ngokwe-API 6A imigangatho ngokupheleleyo, ikwanokubonelelwa ukuhlangabezana neklasi epheleleyo yezinto, uluhlu lobushushu kunye neemfuno zenqanaba lePSL kunye nePR. Sineentlobo ezininzi zeentlobo zeentloko ze-OEM ezikhethiweyo, ezifana ne-spool wellhead, inkqubo ye-ESP ye-wellhead, i-wellhead ye-thermal, i-wellhead ye-injection yamanzi, ixesha lokugcina i-wellhead, i-wellhead ye-tubing.
Inqanaba lokucaciswa kweMveliso: I-PSL1 ~ 4 Udidi lwezixhobo: I-AA ~ HH Imfuno yokuSebenza: I-PR1-PR2 Class Class: LU
Igama Umthi weKrisimesi kunye neNtloko
Umzekelo Umthi weKrisimesi oqhelekileyo / i-Wellheads ye-Geothermal / ii-Wellheads ezininzi njl
Uxinzelelo 2000PSI ～ 20000PSI
Ububanzi 1-13 / 16 "7-1 / 16"
Ukusebenza Tumlawuli -46 ℃ ～ 121 ℃ (LU iBakala)
Inqanaba leMathiriyeli I-AA, BB, CC, i-DD, i-EE, i-FF-HH
Ukucaciswa kwinqanaba PSL1 ～ 4
Inqanaba lokusebenza PR1 ～ 2
Uyilo, ukuvelisa, ukuvavanya kunye nezinto zonke zilandelwa ngumgangatho we-API 6A ngokungqongqo
ikakhulu ibandakanya intloko yokutyubhisha, isango ivelufa, ivelufa wokuminxeka, iflange ephezulu, umnqamlezo njalo njalo
Ulwakhiwo oluphambili lohlobo lokwahlulahlula, uhlobo oluhlanganisiweyo kunye nohlobo lombhobho kabini
Unokulawulwa ukude linani elithile lezivalo zokhuseleko kunye neenkqubo zolawulo
Umsebenzi okhuselekileyo womlilo kunye nokuqhushumba kuyafumaneka
Imithi yeKrisimesi ikhuselekile kwaye ithembekile. Umsebenzi olula kunye nolondolozo
Mintsimbi ekrwada Iimbonakalo:
Ukuphuhliswa kwezicelo apho ezoqoqosho zingoyena mqhubi uphambili. Oku kufezekiswa ngaphandle kokuphazamisa umgangatho okanye ukhuseleko.
◆ Iyafumaneka ukuya kuma-5,000 eepsi kunye nobungakanani bokugqitywa ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya i-3/8 ".
◆ Ilungele iimeko ezimuncu kunye nezonakalisayo.
◆ Sisebenzisa iiNkqubo zaMandla 'ukuphazamiseka kwamatywina e-elastomer kunye ne-elastomer seal compound.
Ukuphuhliswa kwezicelo apho iimeko zemveliso zaziwa okanye zinokuqikelelwa. Olu luvo lubandakanya uyilo lwee-elastomer zamatywina eeNkqubo zezaMandla kunye "nobugcisa" boMzekelo wee-valves zamasango ayi-120/130.
◆ Ifumaneka ukuya kuma-15,000 emithombo ye-psi kunye nobungakanani bokugqitywa ukuya kuthi ga kwi-4 1/16 ".
◆ Ilungele iimeko ezimuncu, ezinobungozi kwaye xa ivelisa kwiindawo ezibuthathaka kwindalo okanye kufutshane neendawo ezinabantu abaninzi (AA ukuya kwi-FF).
Indawo yemveliso ibandakanya ioyile, irhasi, ukuphakamisa igesi kunye nayo yonke imisebenzi yezikhukula kunye nenaliti xa umhlwa unokuba ngumcimbi.
◆ Iyafumaneka kunye okanye ngaphandle kolawulo lwe-porting yomgca. Amachweba amaninzi ayafumaneka xa kufuneka njalo.
◆ Iqinisekisiwe kwi-API 6A, iSihlomelo F, PR-2 kunye novavanyo olongezelelweyo lomjikelo njengoko kufunwa yi-CEPAI.
UKUGQIBELA KWENKONZO ENGUNDOQO
Iphuhlisiwe yezona mfuno zinzima zokuvelisa. Ibandakanya itekhnoloji yetywina yesinyithi-yentsimbi yeNkqubo yaMandla kunye neVeve yokulinganisa yesango engu-120/130.
◆ Iyafumaneka ukuya kuma-20,000 e-psi wells kunye nokugqitywa kobungakanani ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya i-7 1/16 ".
Ilungele iimeko ezimuncu, ezinobungozi kwaye xa ivelisa kwiindawo ezibuthathaka kwindalo okanye kufutshane neendawo ezinabantu abaninzi (AA ukuya kwi-HH).
Iindawo zokuvelisa zibandakanya uxinzelelo oluphezulu kunye nemveliso yegesi enobushushu obuphezulu.
◆ Ngokuxhomekeke kwicandelo, iqondo lobushushu kumphezulu kunokuba phezulu 450 ° F.
◆ Iyafumaneka kunye okanye ngaphandle kokulawulwa komgca wolawulo oluqhubekayo. Amachweba amaninzi ayafumaneka xa kufuneka njalo.
◆ Isebenzisa itekhnoloji yokutywina yentsimbi ukuya kwisinyithi.
◆ Iqinisekisiwe kwi-API 6A, IsiHlomelo F, PR-2 kunye nemijikelezo eyongezelelweyo engama-300 njengoko kufunwa yi-CEPAI.
Iphuhlisiwe ukulungiselela konke ukugqitywa kwentambo yokuhamba. Ibhloko edityanisiweyo inokuqwalaselwa apho ilungele indawo efanelekileyo yoMqhubi. Ivalves inokuba yiyo yonke ejonge ngaphambili okanye enye into apho umtya omde ujonge kwicala elinye kunye nomtya omfutshane we-180 ° offset.
◆ Iyafumaneka ukuya kuthi ga kwimithombo ye-psi eyi-10,000 kunye nobungakanani bokugqitywa ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya i-4 1/16 ".
◆ Ilungele ubumnandi okanye ubumuncu, iimeko ezonakalisayo.
Indawo yemveliso ibandakanya ioyile, irhasi, ukuphakamisa igesi kunye nazo zonke izikhukula kunye nokusebenza kwenaliti.
Uyilo lweeNkqubo zezaMandla ukuphakama okupheleleyo ngokubanzi kunye nokufikelela okuphezulu. Oku kuguqulela kwiindleko zokonga kunye neemeko zokusebenza ezikhuselekileyo zabasebenza kwimveliso.
Interf Sebenzisa uphazamiseko lobunini beenkqubo zamandla kunye neelastomer seals kunye neelastomer seal compound.Ikhona ngokutywinwa kwesinyithi ukuya kwisinyithi ukuba kuyafuneka.
UKUGCWALISWA KWEEMPUPHEKO ZOMBANE
Ukuphuhliswa kwezicelo ze-ESP okanye ze-ESPCP. Iinkqubo zaMandla ziye zabeka emgangathweni ezikhethweni zokungena ukuze kuzalisekiswe zonke iimfuno zoMqhubi ngaphandle kokulahla umbono wesidingo sokugcina inkqubo engabizi mali ininzi.
◆ Iyafumaneka ukuya kuma-5,000 eepsi kunye nokugqitywa kobungakanani ukuya kuthi ga kubandakanywa i-4 1/16 ".
Yenzelwe iCandelo 1 ICandelo 1, iCandelo 1 elingasekelwanga 1, okanye iindlela ezilula zokungena kwepenethi.
Izinketho zokungena ngaphakathi ziye zalungelelaniswa ukubonelela ngokuguquguquka kunye nokulula kofakelo.
◆ Ilungele iimeko ezimnandi okanye ezimuncu kunye nomhlwa.
Iindawo zokuvelisa zibandakanya ioyile kwaye ziyahambelana nokusebenza kwenaliti xa umhlwa unokuba ngumcimbi.
◆ Sebenzisa uphazamiseko lobunini beenkqubo ze-eneji kunye ne-elastomer seals kunye ne-elastomer seal compound.
UKUGQIBELELWA NGOKUFUTSHANE KWENKQUBO / INKQUBO YOKUGQIBELA KAFRAC
Ukuphuhliswa kwezicelo zokuphakamisa izinto ezingezizo zeempompo zeRod kunye neePompo zeCavity Pumps (PCP). Ukusebenzela ngcono intengiso yokuphakamisa izinto ezingezizo, iiNkqubo zaMandla zongeze iiMveliso eziHlanganisiweyo ze-BOPs (IPBOP) kwipotifoliyo yethu yemveliso. I-IPBOP ivumela uMqhubi ukuba angene kwakhona ngokukhuselekileyo emthonjeni ngokutywina ngokuchasene neentonga okanye, ukuba ezo ntonga zahluliwe, ivumela umntu ukuba angaboni into eyenzekileyo.
◆ Iyafumaneka ukuya kuma-2 000 amachiza e-psi kunye nobungakanani bokugqitywa kwaye kubandakanywa i-4 1/16 ".
Imveliso yokuveliswa yioyile kodwa inokulungiswa ukuba ifaneleke ukuba imisebenzi yenaliti ekufuphi yenza imeko enokubangela ukubola.
◆ Nangona izinto ezizimeleyo zinokubonelelwa, i-Integral Production BOP (IPBOP) ingadibanisa ibhonnet yentloko yokuthambisa, imveliso ye-BOP kunye ne-flow tee, okanye nayiphi na indibaniselwano yezi, kwiyunithi enye.
I-BOP eDityanisiweyo ibonelela ngendleko zokonga xa kuthelekiswa nokuthenga izinto ezizezomntu. Ukongeza, iindlela ezivuzayo ezinokubakho zincitshisiwe kakhulu, kwaye ukuphakama okupheleleyo, okunokuba ngama-50% ngaphantsi, kukhuselekile kubaSebenzisi beMveliso.
Iinkunzi zeBOP zinakho ukutywina ukusuka kwi-0 kuye kwi-11/2 "iinduku.
UKUGQIBELELWA KWETYhubhu EBANDILEYO
Kuphuhlisiwe ukuvumela abaqhubi ukuba baqhubeke nemveliso evela kwindalo ephakamisa ioyile kunye nemithombo yegesi ngaphandle kwemisebenzi emikhulu. Iinkqubo zaMandla ziye zahlangabezana nokusetyenziswa okungafaniyo kwemibhobho ebhijelweyo, kubandakanya nokusetyenziswa njengeetyhubhu zemveliso yokuqala ukubuyisela umbhobho odityanisiweyo, kunye nokusetyenziswa njengentsontelo yesantya kukugqitywa okukhoyo, kugxothwa equleni elikhoyo, ilifti yokufakelwa, ukunyuswa kwegesi, ukugqitywa kwe-ESP kunye nokugxininiswa kabini imitya.
Ukunyusa ukonga ngokunciphisa ixesha lokwemba isixhobo sokuhlala esihlala kwindawo.
Kucutha iindleko ze-tubular ngokunciphisa umngxunya kunye nobukhulu beesayizi.
Ukugqitywa okukhawulezileyo kunerig yesiqhelo kunye netyhubhu edibeneyo.
Thintela ukwakheka komonakalo onxulunyaniswa nokubulala ulwelo.
◆ Iyafumaneka kuyo yonke intambo eyaziwayo ye-API kunye nonxibelelwano lweflange okanye ukudityaniswa kwazo zombini.
Ukulinganiswa koxinzelelo kuthelekiswa noxinzelelo olulinganisiweyo lwe-tubing ebhijelweyo.
IBOPHU YOKUQALA YOKUQALA YENKQUBO NOKUQHUBEKA KWEMPUMELELO YOKULONDOLOZA
Kuphuhlisiwe ukuxhasa imisebenzi yokuqhekeka kakuhle kwiinkqubo zanamhlanje zokugqitywa kwegesi. Ukongeza, inkqubo isebenza kakuhle kwizicelo apho amaxabiso aphezulu emveliso ephela ngokukhawuleza kwaye umtya we-siphon uza kongezwa kamva ukuze kuqhubeke imveliso. Intloko encinci yetyhubhu evaliweyo ivumela ukugqitywa koqoqosho okwethutyana kunye nokugqitywa kwemibhobho yendabuko. Olu hlobo lokugqitywa lususa isidingo sezixhobo zokuzihlukanisa kwintloko kunye nokugcina imithi ngexesha lomsebenzi ophuka kakuhle, ukugcina ixesha kunye nemali. Inkqubo ixhasa ukutyibilika okuhlangeneyo okusemgangathweni okanye ukugqitywa kwetyhubhu edibeneyo.
◆ Ifumaneka ukuya kwi-15,000 yemithombo ye-psi.
◆ Ilungele iimeko ezimuncu, ezinobungozi kwaye xa ivelisa kwiindawo ezibuthathaka kwindalo esingqongileyo okanye kufutshane nabantu abaninzi (AA ukuya kwi-HH).
Ukuphelisa isidingo sesixhobo se-Wellhead Isolate kunye nokuGcina iMithi ukunciphisa iindleko zokuqeshisa.
Ukunciphisa ukuqhekeka kweendleko zokuqasha ngenxa yesayizi encinci.
Ows Ivumela umtya we-siphon ukuba uqhutywe nge-XT, uwele phantsi, kwaye upakishwe. I-XT enesibhokhwe esikhulu inokuthi emva koko isuswe kwaye ibuyiselwe umthi onoqoqosho ngakumbi ohambelana nobungakanani beetyhubhu kunye noxinzelelo lwemveliso yomthombo ohamba.
Available Iyafumaneka ukuze isetyenziselwe i-DTO Wellhead System ebonelela ngexesha elongezelelweyo lokomba kunye nolondolozo lokugqiba.
Kuphuhlisiwe ukuvumela ungenelelo oluhle ukuba lwenzeke ngaphandle kokususa i-XT kunye ne-flowline. Oku kuvumela uMqhubi ukuba agcine unxibelelwano lwe-flowline, yiyo loo nto, ukunciphisa iindleko ezinxulunyaniswa nokunxibelelana kwakhona kwequla kunye nokwenza ukuba iqula libuyiselwe umva ngokukhawuleza.
◆ Iyafumaneka ukuya kwi-10,000 psi equlethwe kunye nobungakanani bokugqitywa ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya i-9 ".
Iindawo zokuvelisa zibandakanya ioyile, igesi kunye nokuphakamisa igesi.
Kulula kakhulu ukufikelela kumtya weetyhubhu wokusebenzela.
Ukubonelela ngokufikelela ngokulula kuMsebenzi weeMveliso kwiivalvi zesango.
Ukugqitywa kokubhola okukhudlwana, kunokunciphisa kakhulu ukuphakama okufunekayo kumgangatho wentloko.
◆ Sisebenzisa iinkqubo zamandla 'zokuphazamiseka kwamatywina e-elastomer kunye ne-elastomer seal compound kunye netekhnoloji yethu yetywina yesinyithi yentsimbi.
Ukuphuhliswa kwenqanaba lokuhamba kwenqanaba eliphezulu kunye nokusetyenziswa apho ukhukuliseko ngenxa yala manqanaba okuhamba kungangumba. Olu luvo lusebenzisa itekhnoloji yezaMandla 'itekhnoloji yamva nje kwisinyithi kunye neelastomer seals kunye neModeli 120/130 yesango levalve.
◆ Ifumaneka ukuya kuthi ga kwi-15,000 yemithombo ye-psi kunye nobungakanani bokugqitywa ukuya kuthi ga kwaye kubandakanya i-7 1/16 ".
◆ Kuxhomekeka kwicandelo, ubungakanani bomgangatho wobushushu bunokuphakama njenge-450oF.
◆ Isebenzisa itekhnoloji yetywina yesinyithi-yentsimbi yeNkqubo yaMandla.
◆ Iqinisekisiwe kwi-API 6A, IsiHlomelo F, PR-2 kunye nemijikelezo eyongezelelweyo engama-300 njengoko kufunwa yi-CEPAI
Iphuhlisiwe ukuvumela impompo engena phantsi komhlaba ukuba iphinde ifunyanwe ngongenelelo oluncinci lwentambo kunye neyunithi yokudibanisa ehlanganisiweyo. Umthombo uveliswa ngaphandle kwetyala; Yiyo loo nto umgca wokuhambahamba uhleli ungatshintshiyo xa ungenelelo. Isiphene esaziwayo se-ESPs lulondolozo lwendalo olufunekayo nakweyiphi na impompo ezantsi. Olu luvo loyilo luvumela ulondolozo ukuba lwenzeke kwisiqwengana sexesha ngeendlela eziqhelekileyo zokugqitywa kwe-ESP.
◆ Ukubanakho ukuphinda kuhlaziye imithombo esele ikhona kunye nokuziqeqesha ngokutsha.
Unxibelelwano oluqhubekayo lokuhamba kunye nongenelelo lwe-BOP.
◆ Gcwalisa ukusebenza kakuhle phantsi kweemeko "zokuphila kakuhle".
◆ Ukubekwa ecaleni kwentambo yombane kunye nentambo yentambo.
Umsebenzi okhawulezileyo wokudibanisa kunye nokugcwalisa.
UKUGQIBELA iTLP / SPAR
Iphuhlisiwe ukubonelela ngokufikelela komthi owomileyo kumthombo ongaphantsi kolwandle ukusuka kwiqonga lomlenze wokungavisisani (TLP) kunye neSPAR.
Standards Imigangatho yoyilo olukhulayo olulodwa kunye nesibini sokufaka zonke iinkqubo zonyusa uxinzelelo oluphezulu.
Ifumaneka ukuya kuthi ga kwi-15,000 psi kakuhle kwentloko kunye nobungakanani bokugqitywa ukuya kuthi ga kwi-7 1/16 ".
◆ Ukudinwa okungahambelani nobude bokukhathala kunye neendawo zokudibanisa izixhobo zokukhulisa ngokuchanekileyo nangokukhawuleza ziyanyuka.
Riser umthwalo wemilinganiselo yomthwalo ovumela ukufakwa okulula kunye nokugcinwa.
Uyilo oluhlanganisiweyo olucutha ubunzima kunye nokuphakama kwesithuba esivulekileyo sokuma kakuhle kunye nezithintelo zobunzima bokunyuka kweeyunithi zokugqiba ezomileyo zamanzi anzulu.
Ukusetyenziswa koxinzelelo oluphakathi lwevaluva (6,650 psi) yokonga ubunzima.
Amachweba amaninzi kunye neendlela zokulawula eziqhubekayo.
Uyilo oludibeneyo lwamapulatifomu okufikelela avumela ukufikelela kwabasebenzi okukhuselekileyo kwiimeko ezixineneyo.
Egqithileyo IINTLOKO ZENKQUBO
Okulandelayo: Metal ezimbini-Piece lencopho Ball Valve
Umthi weKrisimesi kunye neNtloko
Intloko kunye noMthi weKrisimesi
Isixhobo seWellhead kunye nezixhobo zeKrisimesi
Isondlo seWellhead kunye noMthi weKrisimesi
I-Wellhead Assembly kunye noMthi weKrisimesi
Uhlobo lweScrew Valve yodaka lwe-API6A